China LXD Self-propelled Convex Line Road Marking Machine rụpụta na ụlọ ọrụ | Luxinda
Oge mmezi ： Ọkt-27-2020
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke onwe-propelled convex akara ụzọ marking igwe. Dabere na data ndekọ ọnụ ọgụgụ mba ụwa, ihe mberede okporo ụzọ ga-ebelata karịa 30% mgbe ejiri akara akara akara akara, ọnwu na ọnwụ akụ na ụba belata. N’ihi nke a ndị ọkachamara na-arịọ maka iji ụdị akara akara a dịka akara akara maka nchekwa okporo ụzọ.
Nkọwapụta nke onye na-arụpụta ihe a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
Dabere na data ndekọ ọnụ ọgụgụ mba ụwa, ihe mberede okporo ụzọ ga-ebelata karịa 30% mgbe ejiri akara akara akara akara, ọnwu na ọnwụ akụ na ụba belata. N’ihi nke a ndị ọkachamara na-arịọ maka iji ụdị akara akara a dịka akara akara maka nchekwa okporo ụzọ.
1. Mmetụta mmanye, na-echetara onye ọkwọ ụgbọ ala ka ọ kwụsịlata na ngalaba dị egwu dị ka ntụgharị na mkpọda.
Ichetara site n'ichekwa: chetara ma dọọ onye ọkwọ ụgbọala aka na ntị bụ onye ike gwụrụ ma ọ bụ nke enweghị uche.
3. Glistening na ezo ụbọchị, iji hụ na draịva nchekwa na doo anya.
4. Mgbochi na-amị amị: Mee ka esemokwu dị n'okporo ụzọ ma bulie ụgbọala ahụ ngwa ngwa.
LXD onwe-propelled vibrating ụzọ marking igwe na-eji maka akara convex ụzọ akara,
ọ onwem na German Kacha ọhụrụ nwere ọgụgụ isi omume njikwa, humanized akara obubọk na akpaka na-eje ije usoro,
nke ọ bụghị nanị na melite ọrụ arụmọrụ nke ukwuu ma na-emekwa ka okporo ụzọ na ike deformation ike,
nkwụsị abrasion, nguzogide ujọ, yana dịka ụkpụrụ ụwa si dị.
Agba akpa ikike 120kg (60L)
Ike nke igbe beads igbe 10kg
Injin Honda ikuku-mma mmanụ ụgbọala
Ike njin 163cc; 5.5HP
Mmanụ Mmanụ ụgbọala
Usoro ịkwọ ụgbọala Na-akpali onwe ya
Speedgba ọsọ na-agba ọsọ ≤1000m / h
Max ọkwa 15 ogo
Bump elu 0-10mm
Line akara obosara 150/200/300/400 / 450mm (nhọrọ)
Nha na ibu 1350 × 900 × 1080mm 265kg
Foto ndị dị na nke a Buy Self-propelled Convex Line Road Marking Machine
Foto anyị dị iche iche nke Factlọ Ọrụ Marklọ Ọrụ Marklọ Ọrụ Ntugharị Onwe-nke Onye Na-ejide Onwe Gị
Na-ele anya nyocha gi maka onye na-emeputa ihe a na-acho Convex Line Road Marking Machine Manufacturer
Peeji mbụ ：Kwọ ụgbọala ụdị ụzọ akara igwe maka plastik oyi-Spotline
Peeji na-esonụ ：LXD-D168 Na-akwọ ụgbọala Typedị Typegbọ Mmiri Na-agba Ọkụ Roadgba Ihe Mgbapụta Ngwaọrụ
LXD400 Hydraulic Single sịlịnda Thermoplastic ...
Road akara Machine N'ihi Thermoplastic Na Ext ...
LXD260B Ultrahigh Pressure Water ọgbụgba ọkụ Road ...